အလင်းရောင် PCB ညီလာခံ - KingSong PCB နည်းပညာ, Ltd
Light က , ထိုကဲ့သို့သောမှော်ရှိ, လူ့က၎င်း၏ရှည်လျားသော road.Lamp ၏လိုက်စား၌စှဲမွဲမှမကြောက်ကြစေ, ငါတို့အဘို့ရှေ့ဆက်လမ်းကို lit, မှောငျမိုကျကိုမှနှုတ်ဆက်ပြောပါ, ညဉ့်ပိုအဆင်ပြေလှပလုံခြုံဖြစ်လာကြကုန်အံ့အတွက် ဤလောက၏အလင်းနှင့်အတူအလင်း, စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်မှုမှတစ်ဆင့်လူတွေကိုအလင်းသိပ္ပံနှင့်အနုပညာစုံလင်ပေါင်းစပ်ဖြစ်လာခဲ့သည်။
အလင်းရောင်, electricity.Lighting အားမီးနှင့်ရေနံကနေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မြောက်မြားစွာအပြောင်းအလဲများကြုံတွေ့လျက်ရှိသည်ကြုံတွေ့အက်ဒီဆင်တီထွင်ဆီမီးခွက်, ချောင်းဆီမီးခွက်, အလင်းရောင်မီးခွက်, စွမ်းအင်ချွေတာမီးခွက်, chandeliers ၏ကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးမှဖွံ့ဖြိုးရေး, ရှုခင်းဖို့မီး, ဖယောင်းတိုင်, ရေနံဆီမီးခွက်သည်ထင်ရှားခဲ့ပါသည် ဆီမီးခွက်, အပူ, အညွှန်းအလင်းအိမ်, အလင်းအိမ်, အလင်းအိမ်, အသေးစားညဥ့်အလင်း, ပုံနှိပ်ဆီမီးခွက်, ပိုးသတ်ဆီမီးခွက်, ဆီမီးခွက်မြှင့်, etc
အလင်းရောင် (ဦးဆောင်တဲ့ pcb) အလုပ်နှင့်လူနေမှုဒေသများသို့မဟုတ်တစ်ဦးချင်းစီတ္ထုအလင်းမှအမျိုးမျိုးသောအလင်းသတင်းရင်းမြစ်များအသုံးပြုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ နေရောင်နှင့်ကောင်းကင်ပြာအလင်း၏အသုံးပြုမှုကို "သဘာဝအလင်း" ဟုခေါ်လျက်ရှိ၏ အတုလငျး "အတုအလင်းရောင်" ဟုခေါ်သည်။ အလင်းရောင်၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကောင်းသောမြင်ကွင်းနှင့်သာယာသောနှင့်သာယာသောပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖန်တီးပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။
ပြည်ထဲရေးဒီဇိုင်းအလင်းရောင်တဲ့ professional illumination ၏ဒီဇိုင်းအရောင်အပူချိန်နှင့်အမျိုးမျိုးသောဗိသုကာ environments.It ၏အရောင်အညွှန်းကိန်းမိုးလုံလေလုံ "ရောင်ခြည်" ၏လိုအပ်ချက်ဖြည့်ဆည်း, ဒါပေမယ့်လည်းပတ်ဝန်းကျင်နှင့် atmosphere.Generally ၏အခန်းကဏ္ဍကိုကစားသင့်ပါတယ်မသာဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်အားဖြင့်လိုအပ်ပါသည် အတွင်းပိုင်းဗိသုကာနှင့်လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာစာရင်းကိုင်နှင့် adjustment.It အတွက်တာဝန်ရှိသည်လည်းအလင်းထှနျးလငျးပေးပါဒါမှမဟုတ်ဆီမီးခွက်များက illuminated သောတစ်ပြည်နယ်ကိုရည်ညွှန်းသည်။
အလင်းရောင်ဒီဇိုင်းကလူ-oriented ဖြစ်သင့်ပေမယ့်ပထမဦးဆုံးလုံခြုံရေးနှင့် Practical နှင့် illumination လိုအပ်ချက်များကိုပြင်းထန်မှု, တပ်ဆင်ခြင်း, ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု, နောက်ဆုံးတော့လူသားဝါဒအတွေးအခေါ်များပေါင်းစပ်ပြီး, မီးခွက်နှင့်မီးအိမ်၏ကောင်းတစ်ဦးဒီဇိုင်းကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါမယ်, အလွန်အရေးကြီးပါသည်ဖြစ်ရမည်, ဒါကြောင့်အလင်းရောင်၏အရည်အသွေး ဦးဆောင် pcb လည်းအရေးကြီးပါသည်။
အလင်းရောင် ကလူအလုံအလောက် illumination (ယေဘုယျအလင်းရောင်) ပေး, ဒါမှမဟုတ်အကောင်းတစ်ဦးအသိအမှတ်ပြုမှု (စသည်တို့ကိုလမ်းအလင်းရောင်, ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်များ,) များကိုအတုအလင်းသို့မဟုတ်သဘာဝအလျောက်အလင်း၏အသုံးပြုမှုကို, (စသည်တို့ကိုအဆောက်အဦအလင်းရောင်, ဝဲအလင်းရောင်) စိတ်ဖိစီးမှု၏ဝိသေသလက္ခဏာများဖြစ်ပါသည် , သို့မဟုတ် (စီးပွားဖြစ်ဇာတ်စင်အလင်းရောင်နှင့်အခြားအထူးရည်ရွယ်ချက် (ဓာတု, ဇီဝ, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ, စက်ရုံစိုက်ပျိုးမှု, etc)) စသည်တို့, အထူးလေထုဖန်တီးအဆင်ပြေအလင်းပတ်ဝန်းကျင် (လူနေအိမ်အလင်းရောင်, etc) ကိုဖန်တီးရန်။
ကဒေသခံအလင်းရောင်သို့မဟုတ်တဲ့အခါမှာရောထွေးအလင်းရောင်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်မဟုတ်ပါဘူးတပ်ဆင်ရန်မသင့်တော်အခါ 1. အထွေထွေအလင်းရောင်ကိုအသုံးပြုရပါမည်။
တစ်ဦးအလုပ်လုပ်ဧရိယာအထွေထွေ illumination ထက်ပိုမိုမြင့်မားဖြစ်ရန်လိုအပ်သည်တဲ့အခါမှာ2အထွေထွေအလင်းရောင်ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
3. ဒါဟာအလုပ်တည်နေရာသိပ်သည်းဆမြင့်မားတဲ့မဟုတျပါဘူး, နှင့်အထွေထွေအလင်းရောင်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သည်မဟုတ်, illumination လိုအပ်ချက်များကိုမြင့်မားသောနေရာများတွင်အဘို့ရောထွေးအလင်းရောင်သုံးစွဲဖို့အကြံပြုလိုတယ်။
4. ဒေသခံအလင်းရောင်တစ်ဦးအလုပ်လုပ်ကိုင်ရာဌာန၌ installed လိမ့်မည်မဟုတ်။
: အလင်းရောင်အမျိုးအစားများခွဲခြားနိုင်ပါတယ် lighting.Where အရေးပေါ်အလင်းရောင် standby အလင်းရောင်, လုံခြုံအလင်းရောင်နှင့်ကယ်ဆယ်ရေးအလင်းရောင်လည်းပါဝင်သည်, ထိုသက်ဆိုင်သောအခြေခံမူရကြလိမ့်မည်သာမန်အလင်းရောင်, အရေးပေါ်အလင်းရောင်, On-တာဝန်အလင်းရောင်, လုံခြုံရေးအလင်းရောင်နှင့်အတားအဆီး အောက်ပါလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်း:
1. တဲ့အခါမှာသာမန် အလင်းရောင်ကြောင့်ပျက်ကွက်ဖို့ငွိမျးသည်အားလပ်ချိန်မှာအလင်းရောင်ပုံမှန်အလုပ်သို့မဟုတ်လှုပ်ရှားမှုများရဖို့သေချာခံရဖို့ရှိပါတယ်နေရာများများအတွက် installed ခံရကြလိမ့်မည်။
3. သာမန်အလင်းရောင်ကြောင့်ပျက်ကွက်ဖို့ငွိမျးဖြစ်ပါတယ်သောအခါ, ထွက်ပေါက်များနှင့်လမ်းကြောင်း်ထမ်းများ၏ဘေးကင်းလုံခြုံကယ်ဆယ်ရေး installed ခံရကြလိမ့်မည်ကိုသေချာစေရန်နှင့်ကယ်ဆယ်ရေးအလင်းရောင် installed ကြလိမ့်မည်
4. on-တာဝန်အလင်းရောင်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသို့မဟုတ်သာမန်အလင်းရောင်အတွက်သီးခြားစီထိန်းချုပ်နိုင်အရေးပေါ်အလင်းရောင်အပေါငျးတို့သအသုံးပြုနိုင်သည် ဖြစ်. ,
လိုအပ်သောအဖြစ် 5. စောင့်တပ်ဖွဲ့အလင်းရောင်ကိုယ်ရံတော်ရဲ့နယ်ပယ်အတွင်း installed ကြလိမ့်မည်
6. အတားအဆီးအလင်းရောင်၏ installation ကိုတင်းကြပ်စွာယင်းဒေသ၏လေကြောင်းသို့မဟုတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဌာန၏သက်ဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်ပြဋ္ဌာန်းရန်ရလိမ့်မည်။
အစိမ်းရောင်အလင်းရောင် လူအများ၏အခြေအနေများအလုပ်လုပ်တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်, အလင်းရောင်ဒီဇိုင်း, မြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်များအသုံးပြုခြင်း, ရှည်သောအသက်, လုံခြုံပြီးတည်ငြိမ်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်အလင်းရောင်လျှပ်စစ်ထုတ်ကုန်များသိပ္ပံမှတဆင့်ရည်ညွှန်း, လေ့လာမှုနှင့်အသက်အစိမ်းရောင်၏အိမ်သူအိမ်သားဘဝနှင့်အရည်အသွေးမှနီးကပ်စွာဆက်စပ်ဖြစ်ပါသည် အလင်းရောင်, မသာ, ပတျဝနျးကငျြဆိုငျရာချွေနှင့်လက်တွေ့အစိမ်း, အရေးအပါဆုံးစွမ်းအင်ထိရောက်ဖြစ်ပါသည်, အစိမ်းရောင်အလင်းရောင်၏ကျယ်ပြန့်အသုံးပြုမှုကိုအလွန်လူတွေအိမ်ထောင်စုပတ်ဝန်းကျင်တိုးတက်စေပါလိမ့်မယ်။
semiconductor စွမ်းအင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်း၏အရေးပါသောလယ်ကွင်းအဖြစ်, လည်း Solid-State အလင်းရောင်အဖြစ်လူသိများ, အလင်းရောင် LED အက်ဒီဆင်တီထွင်မီးခွက်နှင့်စွမ်းအင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, ရှည်သောအသက်နှင့်ကျယ်ပြန့်လျှောက်လွှာ၏ချောင်း lamps.Because ပြီးနောက်အခြားအလင်းအရင်းအမြစ်တော်လှန်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ နည်းပညာအဆက်မပြတ်, အရေးပေါ်၏စွမ်းအင်ကိုချွေတာအကျိုးသက်ရောက်မှု breakthroughs အဖြစ်, စက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့် applications များ၏စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးချဲ့တရုတ်နိုင်ငံတွင် LED မီးအလင်းရောင်စွမ်းအင်ချွေတာရေးစက်မှုလုပ်ငန်း၏လယ်ပြင်တွင်, ချဲ့ထွင်ရန်ဆက်လက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏အရေးပါသောကာလထဲသို့ဝင်ခဲ့ပါသည်, ထိုရန်စနစ်တကျလမ်းညွှန်ဖြစ်သင့် စက်မှုလုပ်ငန်း, စွမ်းအင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်ထုတ်လွှတ်မှုလျှော့ချရေးအောင်မြင်ရန်, အစိမ်းရောင်အလင်းရောင်စီမံကိန်းကိုမြှင့်တင်ရန်, ထို LED မီးအလင်းရောင်စွမ်းအင်ချွေတာရေးစက်မှုလုပ်ငန်းများကျန်းမာဖှံ့ဖွိုးတိုးမြှင့်တင်ရန်။
အလင်းရောင်ထုတ်ကုန် LED ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဘို့အကောင်းတစ်အခြေစိုက်စခန်းရှိသည်, တရုတ်အတွက်အလင်းရောင်စွမ်းအင်ချွေတာရေးစက်မှုလုပ်ငန်း LED အသစ်သောအလင်းရင်းမြစ်ရဲ့နောက်မျိုးဆက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ဦးတည်ချက်တစ်ခုအတော်လေးပြည့်စုံစက်မှုဇုန်ကွင်းဆက်များနှင့်အချို့သောစက်မှုစကေးဖွဲ့စည်းခဲ့ထားပါတယ်ဖြစ်လာသည်တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ LED မီးအလင်းရောင်ဖြစ်လာခဲ့သည် စက်မှုလုပ်ငန်းအမြန်ဆုံးကြီးထွားလာဒေသတစျခု။
KingSong အတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပါတယ် LED မီး PCB နှင့် မီး PCB ညီလာခံ, ပြင်းပြင်းထန်ထန်နဲ့ LED အလင်းရောင်စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ကူညီပံ့ပိုး, ကုန်ထုတ်လုပ်ရေးအလင်းရောင်အပါအဝင် pcb, အရင်းအမြစ်ရှာအစိတ်အပိုင်းများနှင့်တပ်ဆင်ဦးဆောင် အလင်းရောင် pcb စည်းဝေးပွဲကို ကျနော်တို့ကိုကမ်းလှမ်းအဆိုပါဦးဆောင် pcb အားလုံးသင့်ရဲ့အလင်းရောင်ထုတ်ကုန်များအတွက်ဝတ်စုံဖြစ်ပါတယ်, အမြင့်ပါဝါ ၏ LED လူမီနီယမ်အခြေစိုက်စခန်း PCB , အများ၏ LED နိမ့်အာဏာကြေးနီအခြေစိုက်စခန်း PCB, ကြွေအခြေစိုက်စခန်း PCB, FR4 PCB ကောင်းသောအပူစွမ်းဆောင်ရည်၏လူမီနီယမ်အခြေစိုက်စခန်း PCB အမျှ, High-Power က Lighting ထုတ်ကုန်အသုံးအများဆုံး လူမီနီယမ်အခြေစိုက် PCB.